ANIGA IYO MUQDISHO WQ; Cali M. Diini | Laashin iyo Hal-abuur
ANIG IYO MUQDISHO
Inta aynnaan soo gaarin koontaroolka waqooyi ee magaalada laga soo ballaysimaba waxa aan dareemay isbeddal wayn oo aanan asaga oo kale horay u arag: tirada baabuurta iyo dadka laamiga yaacaya ayaan la indhadaraandaray. Dhismayaasha faraha badan iyo dhirta badan ee magaalada ayaa ayaguna la ma filaan igu noqday. Wax walba oo aan subaxaas indhaha saaray la yaab ayay igu noqdeen. Guryaha iyo dhismayaashu ka quroon ka na dhaadheer oo ka fidsan kuwii aan arki jiray. Baabuurtu ka tirobadan ka na qurux iyo noocyo badan kuwii aan arki jiray. Dadku ka dhalaal iyo labbis qurxoon kuwii aan arki jiray. Magaaladu ka baaxad wayn u ma na dhawa Gaalkacyadii aan aqaannay Bandarqaali na warkeedaba ha soo qaadin. Waa sidaas oo aanan weli arkin hal meel oo ka mid ah haddii Muqdisho labaatan qaybood loo dhigo. Nin aan dhul marini dhaayo ma leh.
Aad bay u kala fogaayeen Muqdishadii qarnigaan dabada jeediyay badankiisa ay darteed gobollo iyo magaalooyin badan oo Soomaaliyeed u faaruqeen iyo Muqdishada aan subaxaas inatareega uga degay. Iskadhaaf qof Muqdisho joogay maalmeheedi dahabiga ahaaye (1960, 70,iyo 80yadii) waxaa subaxaas haddii uu i arki lahaa igu qosli lahaa Ibnu Batuuta oo Muqdisho iiga soo horreeyay in ku dhow 700 oo sannadood. Layaab se ma ahayn in aan la yaabo Muqdisho, waayo, sidaas aan u la yaabay ayuu Ibnu Batuutaba u la yaabay ilaa uu waynankeeda iyo fidsanaanteeda ku tilmaamay mid aan dhammad lahayn. Waxa ii muuqday oo aan la indhadaraandaray waa hambadii ka hartay Muqdishadii waynankeedu uusan dhammaadka lahayn cahdigii Ibnu Batuuta oo qarnigii labaatanaad inta sii labalixaadsatay maalmihii aan dhashay figta sare gaartay. Malaha, waxyaabaha Muqdisho ka sinnayd maalintii uu Ibnu Batuuta doonta ku yimid iyo subaxii aan inatareega ku imid waa suuqii waynaa oo Ibnu Batuuta ugu yimid oo inta sii ballaartay noqday kan ugu wayn Bariga Afrika, hilibkii, bariiskii iyo qudaartii tirada badnayd oo aniga iyo asaga ay isku si inoogu soortay.